ဒါကဘက်ထရီကိုမသုံးပဲပျံသန်းနိုင်တဲ့ပထမဆုံးစက်ရုပ်ပိုးကောင်ပါ။ | Gadget သတင်း
Juan Luis Arboledas | | ယေဘုယျ
စမတ်နာရီ၊ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး၊ လက်ပ်တော့ပ်များကဲ့သို့သောလျှပ်စစ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုယနေ့အချိန်ထိလူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းမှအဆက်ပြတ်ခြင်းမရှိဘဲဘက်ထရီအတွင်း၌ထားစရာမလိုပဲအလုပ်လုပ်နိုင်မည်ကိုမစဉ်းစားနိုင်ပါ။ တစ် ဦး ဖန်တီးခြင်းဆိုပါစို့ ပါဝါကေဘယ်လ်သို့မဟုတ်မည်သည့်ဘက်ထရီကိုမဆိုအသုံးမပြုဘဲရွေ့လျားနိုင်သည့်စက်ရုပ်.
ဤသည်မှာစက်ရုပ်ကမ္ဘာနှင့်သက်ဆိုင်သောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအားလုံးတွင်ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေသောပြproblemနာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ပါဝါကေဘယ်လ်မပါဘဲလုပ်လိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲရမည်။ အဲဒါကိုသိမ်းပိုက်သမျှသောအသံအတိုးအကျယ်အကြောင်းကို။ ဆိုလိုသည်မှာယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်သေးငယ်သောစက်ရုပ်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အနည်းဆုံးယခုအထိပင်ဖြစ်သည် ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ် သူတို့ကဒီပြproblemနာအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုရှာတွေ့ခဲ့ပုံရသည်။
1 ၀ ါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှအင်ဂျင်နီယာများက RoboFly ကိုစက်ရုပ်ပိုးမွှားကိုပြသခဲ့သည်
2 RoboFly သည်လေဆာအလင်းမှတစ်ဆင့်စွမ်းအင်ကိုရရှိသော photovoltaic ဆဲလ်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်လှုပ်ရှားနိုင်သည်
၀ ါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှအင်ဂျင်နီယာများက RoboFly ကိုစက်ရုပ်ပိုးမွှားကိုပြသခဲ့သည်
ဒီ ၀ င်ပေါက်တစ်လျှောက်မှာပြန့်ကျဲနေတဲ့ပုံတွေမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း၊ ၀ ါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့သည်လျှပ်စစ်ထောက်ပံ့သောဘက်ထရီကိုမလိုအပ်ဘဲပျံနိုင်သည့်စက်ရုပ်အင်းဆက်ပိုးမွှားများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်လပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်နေခဲ့သည်။ စွမ်းအား။ ဒီစက်ရုပ်ကိုအဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ကပြသခဲ့သည်။ RoboFly christened ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
စက်ရုပ်တစ်လုံးတွင်ဘက်ထရီအသုံးပြုခြင်းသည်အဖွဲ့ရင်ဆိုင်ရသည့်အဓိကပြproblemsနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ အလေးချိန် ၁ ဂရမ်ထက်နည်းသောအလေးချိန်ရှိသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအကြောင်းပြောနေသည်မှာစဉ်းစားပါ၊ ကျော်လွှား။ မရသောအတားအဆီးဖြစ်သောကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်သည်ပျံသန်းခြင်းကိုမတားဆီးနိုင်ပါ။ ဤအချက်ကြောင့်ဤကြိုးပမ်းမှုမတိုင်မီရှေ့ပြေးပုံစံများကိုပြုလုပ်ရာ၌စမ်းသပ်မှုများတွင်၎င်း၏ပါဝါအတွက် cable ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် iteration တွင် RoboFly သည်ဤကေဘယ်လ် (သို့) မည်သည့်ဘက်ထရီအမျိုးအစားမဆိုမလိုအပ်ဘဲရွေ့လျားနိုင်သည်။
RoboFly သည်လေဆာအလင်းမှတစ်ဆင့်စွမ်းအင်ကိုရရှိသော photovoltaic ဆဲလ်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်လှုပ်ရှားနိုင်သည်
စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးတာဝန်ခံသုတေသီများမှထုတ်ဝေသည့်စာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းစက်ရုပ်အားပါဝါကေဘယ်လ် (သို့) ဘက်ထရီမလိုအပ်ဘဲအလုပ်လုပ်စေရန်အင်းဆက်ပိုး၏တည်ဆောက်ပုံကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ photovoltaic ဆဲလ်ကိုအင်တင်နာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး ဦး တည်ရာရောင်ခြည်ကိုရရှိသောလေဆာရောင်ခြည်''နောက်ဆုံးတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဤသေးငယ်သောလျှပ်စစ်စီးကြောင်းသည်အလိုအလျောက်သေးငယ်သောထရန်စဖော်မာအားဖြင့် ၇ V မှ ၂၄၀ V ထိသွားပြီးလိုချင်သောလှုပ်ရှားမှုကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည့်စွမ်းအင်လုံလောက်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ရှေ့ပြေးပုံစံ၏အဓိကအားနည်းချက်မှာလေဆာတွင်အင်းဆက်ပိုးမွှားအတွက်ခြေရာခံသည့်စနစ်မရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အတောင်များနှင့်ပျံတက်ခြင်းကိုစတင်သောအခါစွမ်းအင်နှင့်မြေများကိုပြန်လည်ရရှိခြင်းကိုရပ်လိုက်သည်။ ယခုအချိန်တွင်အင်ဂျင်နီယာများသည်aလေဆာရောင်ခြည်သည်အင်းဆက်၏ photovoltaic ဆဲလ်ကိုအချိန်နှင့်အမျှအမြဲတမ်းညွှန်ပြနိုင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သောပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်.
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သောသေးငယ်သောအရွယ်အစားစီမံကိန်းများ၏ယနေ့အကြီးမားဆုံးကန့်သတ်ချက်သည်ကြီးမားသောဘက်ထရီများအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သလိုပင်စာသားများသည်ပျံသန်းခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည့်၊ ဒီအသုံးအနှုန်းတွေမရှိဘဲ၊ အနည်းဆုံး၊ သူတို့ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်မရှိ.
ယခုအချိန်တွင်ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့, ကျနော်တို့ကရှေ့ပြေးပုံစံအသစ်, သာ။ ထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းရှိသည်, များစွာသောနည်းပညာကုမ္ပဏီများကအလွန်ကြီးစွာသောဖြစ်နိုင်သည်ကတည်းကစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပြီ ၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနည်းပညာနှင့်၎င်း၏နည်းစနစ်များအားလုံးကိုအသုံးချနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည့်အခြားနယ်ပယ်များစွာတွင်တိုးတက်မှုရှိသည် အသုံးပြုမှု၏ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအချိန်အတွက်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » ဒါကဘက်ထရီကိုမသုံးပဲပျံသန်းနိုင်တဲ့ပထမဆုံးစက်ရုပ်ပိုးကောင်ပါ
Pedro Reyes ဟုသူကပြောသည်
သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ငါပျားများပေါ်လာပြီးဤစာမူကကျွန်ုပ်အားသတိရစေသည့် Black Mirror ၏ဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။
Pedro Reyes အားပြန်ပြောပါ
Panasonic LUMIX FT7 အသစ်ဖြစ်ပြီးစွန့်စားသူများအတွက်ကင်မရာဖြစ်သည်